चर्चामा मेलिना राई: जे गायो, त्यही हिट ! – Rastriyapatrika
चर्चामा मेलिना राई: जे गायो, त्यही हिट !
– गोकर्ण गौतम
‘पिरेम नलाउने…’, ‘बैंसै बेइमानी…’, ‘नाच फिरिरि…’, ‘हुकुम बक्सियोस्…’ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेका गीत । चारै गीतकी गायिका भने एकै हुन् मेलिना राई । चाहे फिल्म होस्, चाहे एल्बम । जताततै मेलिनाकै माग छ । जे गायो, त्यही हिट । रेकर्डिङ बाहेक देश/विदेशका कन्सर्टमा पनि भ्याईनभ्याई छ उनलाई । गीत गाउनकै लागि एक दर्जन मुलुक पुगिसकेकी मेलिना भन्छिन्, “मेरो मिहिनेत त छँदैछ, दर्शक/श्रोता र कम्पोजरको माया मुख्य कुरा हो ।”
यो सबथोक बदलिएको थियो, नाईं नभन्नु ल ३ मा ‘ कम्मरमाथि पटुकी…’ गाएपछि । ‘कम्मरमाथि पटुकी…’ गाउनुअगाडि मेलिनाले चार–पाँच गीत रेकर्ड गराए पनि खासै फलदायी रहेन । नोभेम्बर रेनको ‘ पलभरमै खुसी…’ लोकप्रिय त भयो तर एकल गायन नभएकाले जस पाइनन् । मेलिना सम्झिन्छिन्, “त्यतिबेला मैले हरेस खाइनँ, राम्रो अवसरको प्रतीक्षामा थिएँ, ‘कम्मरमाथिको पटुकी…’ले त्यो अभाव पूरा गरिदियो ।”
उनको त्यतिबेला उदय भयो, जतिबेला अञ्जु पन्तको करिअरमा दरार देखा पर्न थालेको थियो । अञ्जुको व्यक्तिगत आनीबानीका कारण संगीतकारहरु विकल्प खोजिरहेका थिए । मेलिना पहिलो रोजाइमा परिन् । श्रुतिमधुर गायिकी कलाको धनी जो थिइन् ।